Don’t feed the troll | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » Don’t feed the troll
Posted by Zaw Thant on Jul 17, 2013 in Society & Lifestyle, Think Different | 25 comments
Don't feed the troll Troll
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားပါ.. သူများ Troll လုပ်တာမခံနဲ့ Troll သားကောင် အဖြစ်မခံနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါ..
သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ Forum တွေ Internet ပေါ်မှာ ပြောကြဆိုကြတာတွေ ကြာပြီဆိုတော့ ဒီ ကိစ္စက သိပြီးသားဖြစ်နေပြီ (အင်တာနက်ပါးဝနေပြီပေါ့).. ကိုယ်ဆီမှာတော့ Social Media တွေ အခုမှအားကောင်းလာတော့ နည်းနည်းစိမ်းနေသေးတယ်ထင်တယ်.. ဒါပေမယ့် အဲ့လို Trolling တွေပေါ်လာမယ့် အရိပ်အရောင်တွေ တွေ့နေရပြီ..
ပထမဆုံးရှင်းပြရမှာက Trolling သဘော.. သူများစိတ် အနှေက်အယှက် ဖြစ်အောင် ကသိကအောင့်ဖြစ်အောင် ပြော/ရေး ပြီး တမင် ဆွတာပါ.. အဓိပါယ်မရှိတဲ့ကိစ္စကို ဟုတ်ပါတယ်လို့ ဇွတ်ပြောပြီး အ ချင်ယောင်ဆောင်တာ၊ လူအများက ဒါအမှန်လိုယူဆတဲ့ ကိစ္စကို ဟိုဟာအမှန်ဆိုပြီးဝင်လုပ်တာ တွေပါပါတယ်.. အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီး လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုယူပါတယ်.. သူပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုပဲ လူအများက ပြန်ရှင်းတဲ့လူရှင်း၊ ရန်တွေ့တဲ့လူကတွေ့၊ ပေါက်ကွဲတဲ့လူက ပေါက်ကွဲ.. အဲ့လိုဆို သူ့ရဲ့ Trolling အောင်မြင်ပါတယ်.. ကြည့်ပြီး ရယ်နေရုံပေါ့.. အများအားဖြင့် လူချင်းမမြင်ရတဲ့ Social Media တွေ Internet Forum တွေမှာတွေရတတ်ပါတယ်..
ဥပမာ အာဇာနည်နေ့ နီးလို့ လူအများက ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း အာရုံကျနေ ရေးနေကြတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မကောင်းကြောင်း ကလိတဲ့ ရိတဲ့သဘောလေးရေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ.. အဲလိုရေးတဲ့ နေရာမှာ Troll လုပ်သူ ဘယ်လောက် ပညာပါပါရေးနိုင်လဲ ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်.. ဗလိုင်းကြီး မကောင်းပြောတာ၊ဆဲတာမျိုးထက် ယုတ္တိရှိအောင် ရေးနိုင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်တဲ့လူတွေ ခံရခက်နိုင်ပါတယ်.. (ဥပမာ။ ဂျပန်တွေခေါ်သွင်းလာတာ အမြော်မြင်နည်းလို့.. အလုပ်ကြံခံရတာ ကိုယ်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးလွန်းလို့.. စတဲ့ ဆွဲထုတ်လိုကောင်းတဲ့ အစတွေကိုင်ပါမယ်).. ပြီးတော့ ခပ်ပါးပါးလေးရေးနိုင်ရင် Troll လုပ်ပြီးပဲရေးတာလား တကယ်ကိုစိတ်ထဲရှိလို့ ရေးတာလားဆိုတာလည်းခွဲရပိုခက်သွားတယ်.. အဲ့တော့ ပွဲပိုဆူပါမယ်..
အခုခတ်မှာ ဆရာဝန်နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်.. ဘာမှ မတတ်လို့ ဆေးကု မစားတဲ့ ဆရာဝန်ရယ်၊ ပိုက်ဆံ မက်လို့ ရမ်းကုစားတဲ့ ဆရာဝန်ရယ်.. အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့.. ဥပမာဆိုတော့ သိသာအောင် ရေးထားတာ။ ဒါထက်ပါးအောင် ရေးထားတာမျိုးဆို တကယ်ရေးတာလား တမင် ဖွ (trolling) တာလားမသိရတော့ဘူး.. ဆရာဝန်တွေ ဖတ်မိပြီး နာကြ၊ ပြန်တုန့်ပြန်ကြ ဖြစ်ရော.. တကယ်ဆရာဝန်တွေကို ကြည့်မရလို့ရေးတာတွေလဲ ရှိတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ပို Troll လုပ်လို့ကောင်းပါတယ်.. ခွဲရလည်းခက်ပါတယ်..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုထောက်ခံတဲ့ လူကြားထဲသွားပြီး ဦးသိန်းစိန်က ဘယ်လိုသာကြောင်းသွားပြော ရင်လည်းရတာပဲ.. မြန်မာ အချင်းချင်းပဲယူထားတာ.. အပြောမဟုတ် လက်တွေ့လုပ်ပြနေတာ စသည်ဖြင့်..
အဓိက ကတော့ လူတွေရဲ့ Attention ကိုဆွဲယူလိုက်တာပဲ.. အပျော်သဘောလုပ်ကြတာများပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခံရတဲ့သူတွေကျတော့ ဒေါသတွေထွက်၊ တုန့်ပြန်ရေးကြနဲ့ အလုပ်အကိုင် ပျက်ပါတယ်.. အဲ့တော့ အကောင်းဆုံးက Don’t feed the troll တဲ့.. Troll မှန်းသိရင် သူလိုချင်တဲ့ Attention မပေးပါနဲ့တဲ့ (starve the troll of attention by ignoring it).. Troll အစစ်လား တကယ်သူ့ အမြင်ကို ရေးနေတာလား ဆိုတာ ခွဲဖို့ ဆိုရင်တော့ သူ့ Profile pic အစစ်ဟုတ်မဟုတ်၊ သူ့ Account သက်တမ်းကြာပလား၊ သူ့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ Response တွေအရကော တကယ်ပဲ အ တာလား၊ အချင်ယောက်ဆောင်ပြီး Trolling လုပ်နေတာလားခွဲ လိုရတတ်ပါတယ်တဲ့.. ဒါပေမယ့် တခါတလေ Troll လုပ်ပုံ ပါနပ်ရင်တော့ ခွဲရခက်ပါတယ် လို့ ပြောကြပါတယ်..
Just for Information ပေါ့.. Social Media တွေမှာ Troll အစစ်တွေနဲ့တွေရင် အချိန်ကုန်နေမှာ စိုးလို့.. ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ချင်ရင်တော့ Google မှာ Don’t feed the troll လို့ ရေးရှာကြည့်လိုက်ပါ..
ဒါလည်း နာတို့ကို ထရိုးလုပ်နေတာဟုတ်??
ဒါနဲ့ ဒီ ပို့(စ) လေးသွားကြည့်လိုက်ပါအူးးးး
.. ဝင်တောင့် မန့် ပြီးပါဘီ..
တွေ့ဖူးတယ်ဗျ..ဖွဘုတ်ပေါ် ခွထိုင်ပီး ဘယ်သူ့မှ အကောင်းမပြောတဲ့လူ …
သူ့ဟာသူကျတော့ ကောင်းသလားဆိုတော့ မကောင်းဘူး ..ဘာတဲ့ ဖားသက်ပြင်းဆိုလား ဘာဆိုလားဗျာ..။
.. အာ့ဆိုလည်း “don’t feed the ဖား” ပေါ့ဗျာ..
.. အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က.. ချွန်တွန်းလုပ်ဖို့.. ဌာနတခုဖွဲ့ပြီးကိုလုပ်တယ်…. လို့ယူဆမိတယ်..
ယူအက်စ်မှာလည်း.. ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လို့.. သေချာတယ်..။
.. ကျွန်တော်တို့ဆီလည်း လာမှာပါဗျ..
မှတ်သားစရာတွေချည်းပဲဗျာ..။ အခုတစ်လော ဒါမျိုးတွေချည်းပဲတွေ့တွေ့နေရာတာ အသည်းယားတယ်။ နောက်ဆို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရမယ်။
.. Trolling ကို အသည်းကုတ်တာ လို့ ဘာသာပြန်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ..
မဟုတ်ဘူး အသည်းကို ခွေးလယားသီး မှုန့် ဖြူးတယ်ဆို ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
Don’t feed the troll ဆိုတဲ့အသုံးလေး သဘောကျသွားတယ်။
အယင်က အိုက်လိုကိတ်စကို bully လုပ်တယ်လို့ကြားဖူးတာ။
Cyber Bullying ဆိုလားဘဲ….
.. idiom ဆန်ဆန်သုံးထားတာပါပဲ.. ခေတ်စကားပေါ့.. cyber bully က အနိုင်ကျင့်တဲ့ သဘော၊ trolling က မခံချင်အောင်စတဲ့ သဘော ပေါ့..
cyber bullying က troll ထက် ပိုကြီးမလား လို့
.. cyber bully က အများက တစ်ယောက်တည်း ကို အနိုင်ကျင့်တာ.. trolling ကတစ်ယောက်တည်းက လူအများကို ကလိတာ.. အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလားပဲ..
ကိုယ်တိုင်က လိုလိုချင်ချင်နဲ့ …
..အဲ့ဒါအဟုတ်ပဲ.. အဲ့ဒါကြောင့် don’t feed the troll ပါလို့ သတိပေးကြတာ..
ခုတလောတင် ရွာထဲက ပို့စ်တစ်ခုမှာ ကွန်မန့်က လင့်ကိုနှိပ်လိုက်တာ
အဲဒီ Don’t feed the troll ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ခုကျလာဖူးတယ်။
ဘာကြီးမှန်းမသိလို့ အသာပိတ်ပြီး ရှေ့မဆက်တော့ဘူး။
Internet ပေါ်မှာဆို don’t feed the troll ဆိုတာကို ကာတွန်းပုံလေးတွေနဲ့ တောင်ပြကြသေးတယ်..
ဒါဆိုဒို့သဂျီးက ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာလို့ လှလှလေး နာမည်ပေးထားပြီး ရွာသူားတွေကို trolling လုပ်နေတာများလား။
.. ဖြစ်နိုင်တယ် ..
ဟုတ်ပါတယ်… သူက ခင်ဗျားတို့ အမေလို ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ပညာမသင်ခဲ့ဖူးဘူး.။
ဟုတ်ပါတယ်… သူက ခင်ဗျားတို့ အမေလို သွားလေရာ မျက်နှာမပွင့်ဘူး..။
ဟုတ်ပါတယ်… သူက ခင်ဗျားတို့ အမေလို တစ်တိုင်းပြည်လုံး ထောက်ခံမူ့ကို မရရှာဘူး..။
ဟုတ်ပါတယ်… သူက ခင်ဗျားတုိ့ အမေလို နိုဗယ်ဆုလဲ မရဖူးဘူး..။
ဟုတ်ပါတယ်… သူက ခင်ဗျားတို့ အမေလောက်တောင် ကျန်းမာရေးလဲ မကောင်းရှာဘူး..။
ဟုတ်ပါတယ်… ခင်ဗျားတို့အမေ သွားလေရာလမ်းမှာ ပန်းတွေပွင့်နေပေမယ့် သူသွားသမျှလမ်းမှာ ဆန္ဒပြတာတွေပဲ ရှိတယ်..။
ဒါပေမယ့် .. ခင်ဗျားတို့အမေ ကုလားကို ကုလားလို့ မပြောရဲချိန်မှာ သူပြတ်သားခဲ့တယ်..။ ခင်ဗျားတို့ အမေ လူ့အခွင့်အရေးလို့ အော်နေချိန်မှာ သူက သူ့ပြည်သူရဲ့ အခွင့်အရေးကိုပဲ ပြောတယ်.။ ခင်ဗျားတို့အမေ တခမ်းတနားနဲ့ ကြိုဆိုခံရချိန်မှာ သူက နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးခန်းမှာ တစ်နာရီကျော်ကြာအောင် မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ခဲ့ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အမေ နိုင်ငံတစ်ကာက လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး မိန့်ခွန်းပြောနေချိန်မှာ သူက နိုင်ငံတစ်ကာက လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ ခေါင်းငုံ့လို့ အကြွေးတွေ လျော်ပေးပါ.. ပိတ်ဆို့မူ့တွေ သိမ်းပေးပါ .. ကျုပ်တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးပါလို့ အောက်ကျခံနေရတယ်..။ ခင်ဗျားတို့အမေ နိုင်ငံခြားထွက်ရင် ဆုယူဖို့နဲ့ လည်ပတ်ဖို့ .. သူနိုင်ငံခြားထွက်တာ အကြွေးလျော်ဖို့နဲ့ အကူအညီတောင်းဖို့..။ ခင်ဗျားတို့ အမေ သမ္မတဖြစ်ချင်ပါတယ် ပြောတော့ သူက သမ္မတရာထူးက အနားယူရင် မုန့်ဟင်းခါးပဲ ရောင်းမယ်ပြောတဲ့လူ..။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. အတင်းအကျပ် စေခိုင်းခံရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် .. အလိုရမ္မက်နဲ့ရယူခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူယူထားတဲ့ ဒီနေရာမှ သူ့တာဝန်ကို သူကျေပွန်အောင် လုပ်နေတယ်..။ ကျုပ် နိုင်ငံရေးအကြောင်း မသိဘူး… ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ကျုပ်နားမလည်ဘူး.. လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားကြီးကို ကျုပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး.. ကျုပ် မြန်မာလူမျိုး .. ကျုပ်တိုင်းပြည်တိုးတက်တာ ကျုပ် မြင်ချင်တယ်… ကျုပ်တို့လူမျိုး ကြီးပွားတာ ကျုပ်တွေ့ချင်တယ်.. ကျုပ်တို့လူမျိုး အဆင့်အတန်းရှိလာတာ ကျုပ်ခံစားချင်တယ်..။ နောင်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူသမ္မဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ သမ္မတ လုပ်ချင်လုပ်ချင် ကျုပ် အရေးမထားဘူး.. ဒါပေမယ့် ကျုပ်လက်ထဲမှာ ရှိမယ့် မဲတစ်ပြားကတော့ ကျုပ်ချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် တစ်ကယ်အလုပ်လုပ်မယ့် သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်..။ ကျုပ်တို့ဟာ အတိတ်ကို တမ်းတနေဖို့မလိုဘူး..မရောက်လာသေးတဲ့ အနာဂတ်ကိုလဲ ရင်မောနေဖို့ မလိုဘူး… လက်ရှိပစ္စုပ္ပာန်မှာ ဘာလုပ်ကြမလဲ ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပဲ အရေးကြီးတယ်…။ လေတစ်လုံး မိုးတစ်လုံးနဲ့ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်မယ့် လူတွေကိုတော့ ကျုပ် မလေးမစားဖြစ်မှာ အမှန်ပဲ..။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ခံယူချက်ချင်း မတူညီရင်လဲ ဆောရီးပါ….. ။ ဒါက ကျုပ်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပဲကိုး…။
Troll အစစ်လား တကယ်သူ့ အမြင်ကို ရေးနေတာလား
ဒါမိုးကျ လော်ဘီ လုပ်တာဖစ်တွားဘီ.. ငိငိ..
လော်ဘီ lobby ဆော်ဩမှု ထက်ပိုတဲ့ ပရိုပါဂန်ဒါ propaganda ဝါဒဖြန်ချီရေး ဆိုက်ဝါး အဆင့်ဗျ…. ဂါဖီးလ် အောက်မှာ ကော်ပီကက်ပေးထားတာလေး ကောင်းလှဒယ်…. ဆက်လုပ်ဂါဖီးလ်… ဦးကြောင် သမဒဖြစ်ရင် တော်ကောက်မည်….
ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ကို စိစစ်ခြင်း
သူ ကမ္ဘာ ကျော် တက္ကသိုလ် မှာ ပညာ မသင်ခဲ့ ရဘူး
ဟုတ်တယ် နိုင်ငံ ကို ဖျက် စီး တဲ့ မသာ တေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့
စစ်တက္ကသိုလ် က ဆင်းလာတာ………….
သူက သွားလေရာ မျက်နှာမပွင့် ဘူး..
အေးလေ…..မျက်နှာ ပွင့်ရအောင်…သူက ဒေါ်စု လို စွန့် လွတ်နိုင်လိုလား….
ခုမှ ကောင်းပြပီး….မျက်နှာလိုချင်လိုတော မရဘူးလေ….
သူကတတိုင်းပြည် လုံးထောက်ခံမှု မရ ပေ့မယ်
တတိုင်းပြည်လုံး၇ဲ့…ကြိုတင်မဲတော၂၀၁၀က ရခဲ့ ပါတယ်……..
သူကနိုဗယ်ဆု မရ ဘူးဆိုတော့….နိုဗယ် ဆု၇လောက်တဲ့ အ၇ည်အချင်း၇ှိပီလားး
ဟိုက နို ဘယ်ဆု၇တာ..အကြမ်းမက်တဲ့ နည်းလမ်းမဲ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲံဝင်လိုလေ
နှလုံးကိုအကြောင်းပြပီး.. မျက်ရည်ခံ ထိုးနေတာလားဟင်…..ခင်ဗျား ကျန်းမာရေးမကောင်းတာ အိမ်တေ်ာမှာ သမားတေ်ာအဆင်သင့်နဲ့………….
ိနိုင်ငံရေးလှုပ်၇ှားသူ တို့ တုန်းက နံရံလေးဘက်သံမန်သလင်းမှာ
ဆေး မ၇ှိ ၀ါးမ၇ှိ သမားနတ္ထိ…….ဒါပေ့မယ်သူ တို့ ကမျက်ရည်ခံ မထိုးဘူးဗျ
ဆန္ဒပြခံရတာ ကတော့သူက စစ်အစိုးရ အဖွဲံမှာ
၀န်ကြီးချုပ် အတွင်ရေးမှုး၁ လုပ်ခဲ့တာကကိုး
စစ် အစိုးရရဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ ကို ဆက်ခံရမှာပေါ့
ကုလားလိုမပြောရဲတဲ အချိန် မှာ သူကပြတ်သားခဲ့တာကကော
ခိုးဝင်လာတဲဘင်္ဂလီတေကို လက်မခံပါ ဆိုပြီး….သူ့ ၀န်ကြီးခင်ရီက
ခိုးဝင်လာတဲ ဘင်္ဂါလီ မ၇ှိ ပါဘူးလို စည်း ၀ါး ၇ိုက် ပြောတာလား….ဟင်
သူရဲ့ပြည်သူ့ ရဲ့ အခွင်အရေး ဆိုတာက လေ…ဟို ဘင်္ဂါလီ ၅သိန်းကို…
နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ဖြစ် တဲ မဲပေးခွင့် ပေးခဲတာ လားဟင်……
စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးမှာ ထိုင်စောင့် နေရတယ် ဆိုတာတော
နိုင်ငံတကာက လူတေအများကြီူးေ၇ှ့မှာ..ရင့် ကော ခေါင်းမော့ ပီး မိန်ခွန်းပြောချင်၇အောင်.၂ယောက် ချင်းစကားပြော၇င်တောင်
စကားပြန် ကြားလူနဲ ပြောနေရတာကို…..လူတေေ၇ှမှာ ဘလိုပြောမလဲ…..
နိုင်ငံတကာကိုအကြွေးတေ လျော်ပေးတာ…အကူအညီ တေပေးတာ.
သူတော်လွန်းလိုထင်နေလာ၂၀၁၀ေ၇ွးကောက်ပွဲ ပြီးလို သူတက်လာတော့
ဘယ်နိုင်ငံ ကလှည် အဖက်လုပ်လို့လဲ……..ဒေါ် စုတို့ ပူးပေါင်းလို့ …ဒေါ်စု မျက်နှာ နဲ လိုက်လျောပေးတာလေ…………….
ခင်ဗျားတို့ စီနီယာ ကြီးတေ သုံး ဖြုန်း ဘုန်း ခဲံ့တဲ သောက်ကြွေးတေကိုဗျ…..
မုန်ဟင်းခါးရောင်းမတဲ့လား ….ဟုတ်မှလဲ ပြော ပါ ကွယ်…
ကမ္ဘာအေးဗီင်္လာ မှာ အိမ်ကြီး ဟီး လို့ဗျ….
တကယ် မုန်ဟင်းခါးရောင်းမယ်ဆိုရင်…. ကျနော ပန်းကန် ဆေးတဲ့ နေရာမှ ၀င်လုပ်အားပေးမယ်……တကယ်ေ၇ာင်းရမှာနော် ဘပြောင်ကြီး…..အာဝါးဒါးရောင်းလိုမရဘူးနော်…
တာဝန်ကျေအောင်တော လုပ်ရမှာပေါ… တလ ကို သိန်း၅၀ တောင်နော်….
သူများတေ ဆို ဘာမှ မရဘဲ အဆင်းရဲခံ ဘ၀ပျက်ခံပီး ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ တိုက်လာရတာ….နော်
ဂဠုန် မင်းတော့ အဆဲခံရတောမယ်…
သာမီး ပြောတာ ဟုတ်ဘူးနော်။ တွေ့တာလေး လာပေးတာ၊၊ ငိငိငိ
.. မှန်ပါ့.. ကို ဂီ ပြောသလို လောဘီ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ကျုပ် ကျုပ် လို့ သုံးပြီး ဘာမှ နားမလည်တဲ့ ပြည်သူ လူကြမ်းကြီး အနေနဲ့ ရေးထားတာပေါ့.. ဒါပေမယ့် ပြောချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုတော့ heart ထိအောင် ရေးထားတယ်.. လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အမှန်တွေ ပေါ် အခြေခံပြီး ပေးချင်တဲ့ info လေးတွေ ညှပ်ထဲ့တယ်ပေါ့ “ကျုပ်လက်ထဲမှာ ရှိမယ့် မဲတစ်ပြားကတော့ ကျုပ်ချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် တစ်ကယ်အလုပ်လုပ်မယ့် သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်..။ ကျုပ်တို့ဟာ အတိတ်ကို တမ်းတနေဖို့မလိုဘူး.”.. အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ..
.. လော်ဘီလုပ်တာ ဆိုလည်း ကန့်ကွက်ဖို့တော့ မရှိပါဘူးဗျာ.. အတိုက်အခံ ဖက်ကလည်း ဒေါ်စု အတွက် လော်ဘီ လုပ်ရတာရှိတာပဲ.. ကိုယ်ကြိုက်ရာ အားပေး ကြတာကိုး..
ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး သဂျီး နဲ့ ဘုန်းကျော် ( အောစတေးလျှ ) ကို